ဆွစ်ရထားများသည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ဆွစ်ရထားများသည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
ဆွစ်ဇာလန်ရထားအဆိုအရဥရောပအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း Boston Consulting Group. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဆွစ်အရည်အသွေးကိုကျဆင်းနေသော်လည်းမြင့်မားသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အောင်မြင်. ဆွစ်တစ်အောင်မြင် 7.2 ထဲကခြုံငုံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 10. ဒိန်းမတ်နေတုန်း, ဖင်လန်, ဂျာမနီနှင့်အားလုံးတစ်ဦးရရှိ 6+ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်. အဆိုပါ ratings များထဲမှ, အထူးသဖြင့်ဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နိမ့်ကျသည်ဟုဖော်ပြရန်အထူးသင့်လျော်သည် 1.9. ကအပေါ်အပြည့်အဝအမှတ်အသားများသွင်းယူသောကွောငျ့ဆွစ်ဇာလန်က၎င်း၏အဆင့်မြင့် rating ရရှိ အသုံးပြုမှုပြင်းထန်မှု.
မြင့်မားသော ratings ရရှိအပြင်၌, ဆွစ်ဇာလန်၏ရထားများသည်ငွေရေးကြေးရေးအတွက်များစွာတန်ဖိုးရှိသည်. အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းညွှန်းကိန်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ;
ဂျာမနီ နှင့် သြစတြီးယား (6.1)
ဆွီဒင်နှင့် ပြင်သစ် (6.0)
ဗြိတိန်နိုင်ငံ ပြီးနောက် နယ်သာလန် (5.3)
ပထမဦးစွာ, ဆွစ်ဇာလန်ရထားဥရောပအကောင်းဆုံးခရီးသွားလာစေအများအပြားအချက်များရှိပါသည်. ဆွစ်ဇာလန်ရထားဥရောပအကောင်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်အချိန်မှန်ပေးပါဘူးဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ဖြစ်စဉ်းစားနေကြသည်သာ အလွန်လုံခြုံ အရည်အသွေးကောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ. ဆွစ်ဇာလန်သည်ဥရောပ၌အများဆုံးသောရထားခရီးသွားများဖြစ်သည် 10,000 ယင်းအပေါ်နေ့စဉ်အပြေးရထား 3000 ကီလိုမီတာရထားလမ်းကွန်ယက်ကို. ဆွစ်ရထားလမ်းကွန်ယက်ကိုဥရောပတိုက်တွင်အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်အသုံးချရှိပါတယ်.
https://www။youtube။com/watch?v = D2wPhSjx09I
အသေးစား သာ. ကောင်း၏
ဆွစ်ဇာလန်ရထားအရေအတွက်ကိုအဆင့်ပြီဘာလို့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ် 1 မှစ. 2012. သေးငယ်တဲ့ရထားလမ်းကွန်ရက်များနှင့်အတူနိုင်ငံများ (အောက် 6,000 ကီလိုမီတာ) ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအချိန်ကာလအတွင်း၎င်းတို့၏ ratings တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်မြင်ကြပြီ. ၎င်းတွင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလည်းပါဝင်သည်, ဒိန်းမတ်, ဖင်လန်, နော်ဝေ, နယ်သာလန်, နှင့် လူဇင်ဘတ်. အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာပိုမိုမြင့်မားအချိန်မှန်ပေး, မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းရာခိုင်နှုန်းနှင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်တစ်ကီလိုလျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်. အညီအမျှအရေးကြီးသည်, အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာရထားသူတို့ရဲ့ခြုံငုံဘေးကင်းလုံခြုံမှုရမှတ်တိုးတက်ရာနည်းပါးလာမတော်တဆမှုနှင့်သေဆုံးမှုရှိ.
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အများကြီးလှပသောခရီးစဉ်သည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ကြားမှရှိပါတယ်. အဲလ်ပ်တောင်များနှင့်ရေခဲမြစ်များသည်အဓိကဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော်လည်းခရီးသွားများလည်းရှေးဟောင်းကိုနှစ်သက်ကြသည် ရဲတိုက်, ရှင်းလင်းသော စိမ်းရေကန်များ, နှင့် bucolic ကျေးလက်. သငျသညျခံစားနိုငျတစ်နှစ်မဆိုအချိန် တောင်တက်, ရေခဲပြင်စကိတ်စီးခြင်း, ပွဲတော်များနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကျင်းပတဲ့ပွဲတွေ. ထို့အပြင်, ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ရာဇ ၀ တ်မှုအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ခရီးသွားများအတွက်ပိုမိုလုံခြုံသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဆွစ်ဇာလန်ရှိမဖြစ်မနေတွေ့ရမည့်နေရာများမှာ Matterhorn ပါဝင်သည်, ကမ္ဘာ့ဓာတ်ပုံအများဆုံးတောင်ဖြစ်သော Zermatt. တူညီစွာ, Chateau က de Chillon, Montreux ခရီးသွားဧည့်များအတွက်-မဖြစ်မနေကြည့်ရှုနေသည်. ပါဝင်ပါသည်သောဤရှေးဟောင်းရေခံတပ် 25 အဆောက်အဦးများနှင့်သုံးတန်တိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးသွားရောက်လည်ပတ်သမိုင်းဝင်အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
တစ်ဦးရထားကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်အတူဆွစ်ဇာလန်ရထားဘွတ်ကင်လုပ်ရန်
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ဆွစ်ရထားပေါ်တွင်သွားလာဤမျှလောက်များစွာသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရထားဘူတာဖြစ်ကောင်းအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း လှပသောရထားဘူတာများ ဥရောပမှာ. သင်ရင်ခုန်စရာအားလပ်ရက်တစ်ခုရှာနေလျှင်သို့မဟုတ် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာတံတား, ဆွစ်ဇာလန်သွားကြဖို့ရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်. ယူ3မိနစ်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦးဆွစ်ဇာလန်ရထားများအတွက်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဖို့ လြယ္ကူစြာအသံုးျပဳရထားဆိုက်. လက်မှတ်တွေကရက်ဒစ်ကတ်များကို အသုံးပြု. ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်, များစွာသောအခြားရွေးချယ်စရာငွေပေးချေမှု.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fswiss-trains-ranked-best-europe%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
SwissAlps ရထားခရီးသွား travelswitzerland